Soso-kevitra 7 hananana ny 'Ho aiza ity?' Fifampiresahana amin'ny bandy - Fifandraisana
Soso-kevitra 7 hananana ny 'Ho aiza ity?' Fifampiresahana amin'ny bandy
Nifankahita nandritra ny fotoana kelikely ianao, ary manomboka tena tia an'ity rangahy ity .
Saingy alohan'ny ahafahanao mamela ny tenanao ho voatarika sy hanomboka haka sary ny ho avy miaraka dia mila manana izany ianao 'The Talk' miaraka aminy.
Ny mpivady vaovao sasany dia tsy mahatsapa ny filàna hipetraka sy hiresaka momba ny alehan'ny zavatra eo anelanelany, satria miharihary ho azy ireo hatrany am-boalohany ary misokatra sy mahitsy hatrany momba ny fihetseham-pony izy ireo.
Fa izany no ankanavaka ny lalàna!
Ny ankamaroan'ny olona ao anaty fifandraisana mamelana dia hiezaka ny hahafantatra tsara izay eritreritr'ilay olona iray hafa, ny fahatsapana na ny drafiny.
Ary raha mamaky an'ity ianao dia mety anisan'izany ianao.
Rehefa dinihina tokoa, ny fahombiazan'ny fifandraisana dia tsy miankina amin'ny simia misy eo aminao fotsiny…
ahoana ny fomba ilazana amin'ny olona iray fa tianao izy
Mety ho lohany ho an'ny tsirairay ianao nefa manana drafitra ho an'ny ho avy izay tsy ataon'ny olon-kafa fotsiny, ary tsy hisy mihitsy ny zava-misy.
Ary tsy ho fantatrao mihitsy raha izany no izy raha tsy manontany ianao.
Na dia mahasadaikatra aza izany resaka izany dia tsara kokoa ny mametraka eo ambony latabatra ny karanao ary hiresahana marina amin'ilay olona ampianarinao.
Amin'ity fomba ity dia azonao antoka fa samy eo amin'ny pejy iray ihany ianao ary samy tsy mandany fotoana.
Raha mieritreritra ianao dia mety ho tonga ny fotoana hanaovana ilay hoe 'Ho aiza ity?' miresaka amin'ny tovolahy hitanao, ity misy toro-hevitra vitsivitsy momba ny fomba hanatanterahana izany.
1. Aza atao aloha loatra.
Angamba ianao vao nahita an'ity lehilahy ity nandritra ny andro na herinandro, fa efa mahatsapa alaim-panahy hanenjika azy ianao ary hanontany raha mahita ho avy izy roa tonta.
Raha tsy hoe niara-nandany ny fotoana nifohazana fanindroany ianao ary natao haingana kokoa ny fizotry ny fifandraisana mahazatra, tsara kokoa angamba ny miandry ela kokoa vao manana The Chat.
Saingy tsy misy fitsipika sarotra sy haingana momba ny fotoana tokony hisy izany.
Aza mihaino na iza na iza milaza fa mila miresaka amin'izy ireo momba ny fahitany ny zavatra mandeha amin'ny daty fahenina na amin'ny andro aorian'ny volana feno.
Miandrasa mandra-pahatongan'ny nanomboka miala sasatra ianao ary mahazo aina amin'ny manodidina azy ireo ary tena mahafantatra azy ireo.
Hanome anao fotoana hahitana ny fahatsapanao azy ireo ary raha ianareo afaka mahita ho avy.
arc vaovao super dragon ball
2. Fa aza avela tara loatra.
Etsy ankilany, aza alaim-panahy hanalavitra an'ity resaka mety hahasadaikatra ity - fa manan-danja - ela loatra.
Fantatro, fantatro. Tena tsy manampy izany. Ahoana no tokony hahalalanao ny tena fotoana marina, na dia tsy manao izany haingana loatra aza ianao ary tsy mamela azy tara loatra?
Rehefa eto an-tany dia amin'ny fotoana mety?
Toy ny mahazatra eto amin'ity fiainana ity dia miankina daholo izany.
Ao anaty lalina ianao, ho avy ny fotoana ahalalanao fotsiny fa tsy mahazo aina ianao amin'ny fitondrana zavatra toa azy ireo.
Raha vao manomboka mahatsapa izany ianao dia mila manaikitra ny bala ary alefa haingana kokoa ity resaka ity fa tsy aoriana.
3. Alao antoka fa samy ao amin'ny sain'ny saina ianao.
Toy ny resaka fifandraisana rehetra, zava-dehibe ny hanananareo roa toe-po rehefa manana izany.
Tsy tokony ho reraka, noana na variana amin'ny asa ny iray aminareo, toa tsy mandeha amin'ny fomba noeritreretinareo ny zavatra iray, mety hanomboka hiteny zavatra tsy tianareo ny iray na ianareo roa.
Na dia mety halaim-panahy aza, tsara ihany koa ny tsy fanaovana ireo dinika ireo rehefa avy nifandray akaiky taminy ianao , satria ireo hormonina rehetra ireo dia mety hiteraka fahasimbana amin'ny fahaizanao misaina tsara.
Samy te hanana zavatra roa eo anelanelan'ny roa ianareo amin'ny fotoana toy izany, na dia mety tsy dia mifantoka be loatra amin'ilay hevitra aza ianao raha tsy nofafazina tamin'io fotoana io.
ny fomba handao ny lehilahy manambady tianao
Tsy tianao ny hilazany aminao izy fa misy ny ho avy eo anelanelanao fotsiny satria entin'ny entin'ny zavatra ara-batana izy, sa tsy izany?
4. Ataovy amin'ny toerana ahatsapanao fa mahazo aina izany.
Raha hipetrakao izy ireo ho an'ny The Talk, dia tsara kokoa hatrany ny manao azy io amin'ny volanao manokana, na amin'ny tany tsy miandany.
Rehefa dinihina tokoa, raha tsy mandeha amin'ny fomba noeritreretinao ny resaka dia hahatsapa ho azo antoka kokoa ianao ary afaka mifikitra amin'ny basy any amin'ireto manodidina ireto noho ianao, ohatra, eo amin'ny toerany.
5. Ampitomboy ny fahatokisanao tena.
Alohan'ny hanaovana an'ity resaka miaraka amin'ilay tovolahy hitanao ity dia tsara ny mampatsiahy ny tenanao fa mendrika ny tsara indrindra ianao, amin'izay tsy mahita ny tenanao milamina kely.
Ny fomba tsara hanaovana an'io dia ny fandaniana fotoana miaraka amin'ny namana na fianakaviana izay tia sy manome lanja anao na mikarakara fikolokoloana tena.
Mandany fotoana hanaovana ny fialam-boly ankafizinao, hikarakara volombava vaovao, na haka fotoana kely fotsiny ho anao, hankafizanao ny orinasanao manokana, ary hampahatsiahivana fa na dia mahafinaritra aza ny fifandraisana feno fitiavana, ny fiainana dia mihoatra lavitra noho izany.
6. Fantaro tsara ny zavatra tsapanao, ny zavatra antenainao ary ny mpifanaraka aminao.
Tsy misy dikany ny fananana an'ity lahateny ity momba ny hoe aiza izy ireo eritrereto fa mandeha ny fifandraisana raha tsy azonao antoka izany ianareo mila azy ireo.
Mety hiezaka ny hisintona ny tenanao amin'ny alahelo ianao amin'ny alàlan'ny tsy famotopotorana na fanekena ny fihetseham-ponao mandra-pahafantaranao raha matotra izy ireo.
Fa raha manantena azy ireo ho marin-toetra sy mazava momba ny zavatra tsapan'izy ireo ianao, dia mila mazava tsara amin'ny fahatsapanao koa.
Tokony ho azonao antoka tsara raha mieritreritra ianao fa mety hiova ho zavatra tena izy ny fahatsapanao fatratra ho an'ity olona ity, ary inona ny zavatra antenainao amin'ny mety ho fivoaran'ny fifandraisana, salama tsara daholo.
Mazava ho azy, tsy azo inoana fa manana fanantenana toa azy koa izy, ka mila mametraka ny zavatra ekenao hampandefitra ary inona no mety ho tsipelina ny fifandraisan'ny mpivady vao.
Faly ve ianao mahita hatrany ny olon-kafa amin'izao fotoana izao, raha izany no tadiaviny? Sa ho sahirana ianao hitondra zavatra eo raha tsy hoe manokana ny zavatra eo anelanelanao?
Zava-dehibe aminao ve ny mametraka marika amin'ny zavatra? Te hihaona amin'ny namanao ve ianao?
Aza hadino ny momba anao sy izy momba ireo zavatra izay manandanja indrindra aminao.
7. Eritrereto ny tsipika fanokafanao.
Hevitra tsara foana ny mieritreritra ny fomba mety hahitanao ilay lohahevitra amin'ny fomba tsy hanaitra tampoka an'ity rangahy ity na hahatonga azy hahatsapa ho mametraka azy eo an-toerana.
Fa na dia tsara aza ny manana hevitra momba ny fomba hanombohanao zavatra sy izay tianao holazaina mandritra ity lahateny ity, zava-dehibe ihany koa ny mandeha miaraka amin'ny onja, ary tena mihaino sy mandray izay lazainy rehetra.
Miezaha tsy hanonofinofy be momba ny mety hisehoan'ny resaka alohan'ny tena anaovanao azy, na mety hiafara hanenina ianao na ho sosotra rehefa tsy milaza ireo zavatra nantenainy ianao.
8. Nefa aza atsangano be loatra ao an-tsainao izany.
Raha miverina mijery an'ity lisitra ity ianao dia mety hahatsapa ho mavesatra kely ny fikarakarana rehetra manodidina ny The Talk. Noho izany, zava-dehibe ny hitazomana ny toe-javatra.
Ity dia mety ho fotoana voafaritra eo amin'ny fifandraisanareo, satria afaka manapa-kevitra raha toa ianareo roa manapa-kevitra ny handroso na hahatsapa fa tsy mety ianareo.
Fa raha tsy manapa-kevitra ny hitondra zavatra ianao, tsy izany no faran'izao tontolo izao.
Arakaraka ny ahitanao fa tsy izy no anao, dia vao mainka ianao hanaiky rehefa tonga ny lehilahy marina.
Manatòna an'ity chat ity am-pahatoniana, amin'ny fanangonana, miaraka amin'ny fanantenana azo antoka sy mazava momba ny fihetsem-ponao manokana, ary hilamina tsara izany amin'ny farany.
Ary raha tsy izany dia tsy mbola ny farany.
Mbola tsy azonao antoka ny fomba anontaniana an'ity lehilahy ity hoe hitany hoe manao ahoana ny fiarahan'izy ireo? Miresaka an-tserasera amin'ny manam-pahaizana momba ny fifandraisana avy amin'ny Relationship Hero izay afaka manampy anao hahalala zavatra. Tsotra.
Inona no dikan'ny hoe miadana ny lehilahy iray?
Ahoana no hahalalana raha vonona ho amin'ny fifandraisana ianao: famantarana mazava 13
Famantarana 10 tsy mbola feno amin'ny asany taloha (+ Inona no hatao)
Raha tsy manam-potoana ho anao ny sipanao dia ataovy izany
inona no ataon'ny olona rehefa mankaleo azy
tsy ampy ahy ianao
tsy miraharaha izay eritreritry ny hafa
manambady ary mifankatia amina lehilahy hafa